Musalsal Masaari ah: Oo lagu Arkay Muuqaal Muran Badan Dhaliyey | Xaqiiqonews
Musalsal Masaari ah: Oo lagu Arkay Muuqaal Muran Badan Dhaliyey
Qeyb ka mid ah muuqaalada musalsalka masaarida ah ee “ضد مجهول” ayaa lagu daawaday,Nadi oo ka mid ah jilayaasha iyadoo gubeysa nin xoogay gabadheeda islamarkaana dilay iyada oo nool, Muuqaalkaasi oo u eg isla muuqaalkii Kooxda IS ay ku dileen duuliyihii Urdun.
Filimkan Oo u muuqdo mid ka shidaal qaadanaya Film Mareykan ahaa oo la dhihi jiray “Eye for an eye” oo la jilay 1996-kii, ayaa waxaa uu ka sheegeynayaa, haweeney gabadheeda la kufsanaayo, ka dibna la dilaayo gabadha iyadoo hooyada ku wacday taleefoonka oo dhaheysa iga soo gaar, laakin hooyada ma soo gaareyso sababa la xariira Ciriirga wadada.
Ka dib dilaaga ayaa ka soo muuqanaya maxkamad lkn qareenadiisa ayaa ka dhigaya mid aan danbi laheyn, iyadoo hooyada ay aaminsantahay in uu yahay ninkan dilaagii gabadheeda dilay, waxayna ku dadaaleysaa sidii ay ugu aargoosan laheyd.
lkn labada film ayaa ku kala duwan Dhamaadka, Filmka “aye for an eye” ayaa hooyada waxaa ay ku aarsaneysaa in ay dilaaga rasaas la dhacdo.
iyadoo filmkan “ضد مجهول” hooyada ay ku aarsaneyso in ay afduubato dilaaga ka dibna ay geyso meel saaxaraha , waxaana halkaasi ka dhacay dil u eg kii 2014-kii ku fuliyeen IS duuliyihii URDUN #mucaad alkasaasibah